စံချိန်သစ်တစ်ခု ထပ်ရတဲ့ ရိုနယ်ဒို ၊ နည်းပြရှာပွဲအစက ပြန်စသွားတဲ့ စပါး ၊ ဟာခီမီ အတွက် ရှေ့တိုးလာတဲ့ ချဲလ်ဆီး တို့နဲ့ . . . ယနေ့အတွက် နောက်ဆုံးရ အားကစား သတင်းများ – Sport Gaber
စံချိန်သစ်တစ်ခု ထပ်ရတဲ့ ရိုနယ်ဒို ၊ နည်းပြရှာပွဲအစက ပြန်စသွားတဲ့ စပါး ၊ ဟာခီမီ အတွက် ရှေ့တိုးလာတဲ့ ချဲလ်ဆီး တို့နဲ့ . . . ယနေ့အတွက် နောက်ဆုံးရ အားကစား သတင်းများ
June 18, 2021 - by Sports Gaber - LeaveaComment
ပေါ်တူဂီ တိုက်စစ်မှူးကြီး ခရစ္စတီယာနို ရိုနယ်ဒို ရဲ့ Instagram Account ဟာ ပရိသတ် သန်း ၃၀၀ ပြည့်သွား ခဲ့ပြီလို့ သိရ ပါတယ် ။ ဒါကြောင့် ရိုနယ်ဒို ဟာ Facebook, Twitter, Instagram စတဲ့ လူသုံး အများဆုံး ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေ မှာ တစ်ခုစီကို အနည်းဆုံး ပရိသတ် သန်း ၃၀၀ ပိုင်ဆိုင်တဲ့ ပထမဆုံး စူပါ စတား ဖြစ်လာခဲ့တယ် လို့ သိရ ပါတယ် ။
နယ်သာလန် ၊ အိုင်ယက်စ် ၊ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် နဲ့ ဘာစီလိုနာ အသင်းတို့ရဲ့ နည်းပြဟောင်း လူး၀စ် ဗန်ဟား ဟာ သူ ဘောလုံး သမား ဘ၀ တုန်းက တစ်ရာသီ ကစား ခဲ့ဖူးတဲ့ နယ်သာလန် ဒုတိယတန်း ကလပ် တယ်လ်စတား ရဲ့ ရန်ပုံငွေ ရှာဖွေပွဲမှာ နည်းပြ အဖြစ် ကိုင်တွယ် သွားမယ်လို့ ကြားသိရ ပါတယ် ။
ချဲလ်ဆီး အသင်းဟာ အင်တာ မီလန် နောက်ခံဠူ ဟာခီမီ ကို ခေါ်ယူရေး အတွက် ရှေ့တိုး ကြိုးပမ်း လာပြီး မားကိုစ့် အလွန်ဆို ကို အလိုက်ပေး ကမ်းလှမ်း သွားဖို့ ရည်ရွယ် နေတယ်လို့ သိရှိရ ပါတယ်
ဂန်နဲရိုး ဂတ်တူဆို ၊ ပေါ်လို ဖွန်ဆီကာ တို့ နဲ့ ချိတ်ဆက်မှုတွေ ဆက်တိုက် ပျက်ပြယ် အပြီး မှာတော့ စပါး အသင်းရဲ့ နည်းပြသစ် ရှာပုံတော်ဟာ အစကို ပြန်ရောက် သွားခဲ့ပြီး လိုပီတီဂွီ ၊ ရော်ဘတ်တို မာတီနက် ၊ အက်ဒီဟိုဝီ ၊ နူနို ဆန်းတိုစ့် စတဲ့ နည်းပြတွေ နဲ့ သတင်းပြန်ထွက် လာခဲ့တယ်လို့ သိရှိရ ပါတယ် ။
အဲဗာတန် အသင်း ပရိသတ် အချို့ ကတော့ ရာဖေး ဘင်နီတက် ကို နည်းပြသစ် ခန့်အပ်မယ် ဆိုပါက ပြင်းထန်တဲ့ ဆန့်ကျင် ဆန္ဒပြမှုတွေကို ကြုံတွေ့ ရမှာ ဖြစ်ကြောင်း ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ် ကနေ ရေးသား သတိပေး သွားခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ် ။
မကြာသေးတဲ့ ရက်သတ္တပတ် တုန်းက ဖလွိုက်မေဝဲသာ နဲ့ သရုပ်ပြပွဲ ထိုးသတ် ခဲ့တဲ့ YouTuber လိုဂန်ပေါလ် က သူဟာ တစ်ချိန်က နာမည်ကျော် ခဲ့တဲ့ လက်ဝှေ့ ချန်ပီယံဟောင်း မိုက်တိုင်ဆန် နဲ့ ထိုးသတ်ဖို့ ကြိုးစားနေပြီး သူ့ အနေနဲ့ တိုင်ဆန် ကို အလဲထိုး နိုင်မယ်လို့ ယုံကြည်ထားကြောင်း ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
အင်္ဂလန် နည်းပြ ဆောက်ဂိတ် ဟာ ဒီကနေ့ ညမှာ ကစားမယ့် စကော့တလန် နဲ့ ပွဲစဉ်မှာ ထရစ်ပီယာ နဲ့ ဝေါ်ကာ တို့ကို ချန်လှပ် ထားပြီး ရစ်ဆီ ဂျိမ်းစ် နဲ့ လုခ်ရှော တို့ကို ပွဲထုတ် သွားဖို့ ရှိနေတယ်လို့ သတင်း ထွက်ပေါ် လာခဲ့ ပါတယ် ။
ဘယ်လ်ဂျီယံ ကွင်းလယ်လူ ကယ်ဗင် ဒီဘရိုင်းနား က သူဟာ အပြည့် အ၀ ကြံ့ခိုင်မှု မရှိဘဲ ကစားနေတာ ၆ လ ခန့် ရှိနေပြီလို့ ထုတ်ဖော် ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
စပိန် လာလီဂါ ကလပ် ဂရန်နာဒါ ဟာ ရောဘတ် မိုရီနို ကို နည်းပြသစ် အဖြစ် ခန့်အပ် လိုက်ပြီလို့ ကြေညာ သွားခဲ့ ပါတယ် ။ ရောဘတ် မိုရီနို ဟာ ရိုးမား ၊ ဆယ်တာ ၊ ဘာစီလိုနာ နဲ့ မိုနာကို အသင်းတွေမှာ နည်းပြ အဖွဲ့၀င် အဖြစ် ဆယ်နှစ်ကျော် လုပ်ကိုင် လာခဲ့ဖူးသူ ဖြစ်သလို လူး၀စ် အင်းနရစ် ခေတ္တ အနားယူထားချိန်မှာ စပိန် လက်ရွေးစင် အသင်းကို ကိုင်တွယ်ပြီး ယူရို ခြေစစ်ပွဲကို ကျော်ဖြတ်ပေးခဲ့သူလည်း ဖြစ်တယ်လို့ သိရှိရ ပါတယ် ။
ပါးမား အသင်းရဲ့ အမာခံ ပရိသတ် ကလပ် ကတော့ အသင်းဟောင်းကို နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကြာမှ ပြန်ရောက် လာမယ့် အီတလီ ဂိုးသမားကြီး ဘူဖွန်ကို မကြိုဆို ခဲ့ဘဲ “ကြေးစားတစ်ယောက် အနေနဲ့ ထွက်သွားတယ် ၊ သူရဲကောင်း တစ်ယောက်လို ပြန်လာဖို့ မမျှော်လင့်နဲ့” လို့ ရေးသားထားတဲ့ စာတမ်းကို ပါးမား ကွင်းဘေးမှာ ကပ်ထား ခဲ့တယ်လို့ သိရ ပါတယ် ။
ဘယ်ဖက် ဒူးဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့တဲ့ ဇလာတန် အီဗရာဟီမိုဗစ်ဟာ ဒဏ်ရာကို အောင်မြင်စွာ ခွဲစိတ်ကုသနိုင်ခဲ့ပြီလို့ အေစီမီလန် အသင်းက အတည်ပြုကြေငြာ သွားခဲ့ပါတယ် ။
နှလုံးခုန်အကူစက်ကို အောင်မြင်စွာ တပ်ဆင်အပြီးမှာတော့ ဒိန်းမတ် ကွင်းလယ်လူ ခရစ်ရှန် အဲရစ်ဆင် ဟာ ဆေးရုံကနေ ဆင်းလာနိုင်ခဲ့ပြီလို့ သိရပါတယ် ။
Previous Article အင်္ဂလန်အသင်းနဲ့အတူ စကော့တလန်အသင်းနဲ့ပွဲစဉ်မှာ မြင်တွေ့ရတော့မယ့် မက်ဂွိုင်းယား
Next Article အမေစုရဲ့ မွေးနေ့ မှာ မြူတွေကျနေတဲ့ရန်ကုန် မြင်ကွင်းများ…